Bystander Intervention Online (Burmese) ဘေးလူများအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် စောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်မှု
ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်း သဘောတရားမှာ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် - လူအချင်းချင်း ကူညီပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြုံနေလျှင် မည်သည့်အရာ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်က သိပါသည်။ လူတစ်ဦး လမ်းပေါ်တွင် ဦးထုပ်ကျကျန်ခဲ့လျှင် သင် ဘာလုပ်ရမလဲ သိသည်။ သို့သော် လူအများမှာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်။ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိကြပါ။ အွန်လိုင်းတွင် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ် ဘာမှအရေးမယူဘဲနေခြင်း) ၏ အကျိုးဆက်များမှာလည်း မရှင်းလင်းသလို ခန့်မှန်း၍လည်း မရပါ။ ပို၍ဆိုးရွားသည်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ အကြမ်းဖက်မှုများကို ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သာ ဖြစ်သည်ဟု စတင်ရှုမြင်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အရာ ဘာမျှမရှိပါဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဒါဟာ အမှန်တကယ်က မဟုတ်ပါဘူး။
အွန်လိုင်းတွင် ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်းသည် “နှုတ်ဆိတ်နေလိုသည့်” အသိစိတ်ကို ကျော်လွှားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရန် လူသားဆန်သည့် သဘောဆန္ဒကို ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းလုပ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး တစ်နေ့တာအတွက် ဒုက္ခရောက်နေသူကို ကယ်တင်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို စွန့်လွှတ်အနစ်နာရမည်ဟုလည်း ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်းသည် သက်တမ်းရင့် သဘောတရားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မင်းတို့အတွက် ငါတို့ရှိတယ် ဟူသော သဘောတရားတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်းသည် အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာများ၊ ကောလိပ်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာတွေ့မြင်ရသည်-- သို့သော်ငြား အွန်လိုင်းတွင် ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်းမှာမူ အခွင့်အလမ်းသစ်နှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ ရှိနေသည့် အယူအဆသစ်တစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာ သင်က နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို လူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရပါက အနီးဝန်းကျင်တွင် အခြားလူများ အမြဲမရှိနိုင်ပေ။ သို့သော် အွန်လိုင်းတွင်မူ လူအများကို အသိပေး၍ ထိုသူများက အကူအညီလာပေးရန် မျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်း ရောက်ရှိလာစေအောင် လုပ်ဆောင်ရသည်မှာ လွယ်ကူပါသည်။ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ပြုလုပ်နေသူများ သတိမပြုမိစေဘဲ အနှောင့်ယှက်ခံရသည့် လူနှင့် ထိတွေ့ချိတ်ဆက်ရန်မှာလည်း ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။
သို့သော် အွန်လိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားမှာ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲသစ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်-- ထိုအထဲမှ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမှာ သင့်အနေဖြင့် လူသိရှင်ကြား ကြားဝင်လိုက်လျှင် ထိုနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုက သင့်ဘက်လှည့်လာရန် လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Hollaback!တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 2020 ခုနှစ်၌ PEN America နှင့် မိတ်ဖက်ပြုလက်တွဲလျက်ပြီး Hollaback! ၏ ဘေးလူများ ကြားဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ D5လုံးကို အသုံးပြုသော၍ အွန်လိုင်းတွင် ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်းအတွက် တစ်နာရီကြာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်- “အာရုံလွှဲပါ (Distract)” “လွှဲအပ်ပေးပါ (Delegate)” “မှတ်တမ်းပြုစုပါ (Document)” “အချိန်ဆွဲပါ (Delay)” နှင့် “တိုက်ရိုက်ဝင်လုပ်ပါ (Direct)။” ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမည့် ဘေးလူများမှ ကြားဝင်ခြင်း ပုံစံ ငါးမျိုးထဲမှ လေးမျိုးမှာ သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နှောင့်ယှက်စော်ကားနေသူများက သင့်ကို သိရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း အွန်လိုင်းတွင် နှောင့်ယှက်ခံနေရသူကိုမူ သင်က အကူအညီပေးနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါမည်။
သင်အစမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းအချို့မှာ-
မိမိကိုယ်တိုင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို အမြဲဦးစားပေးပါ။ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးက အဓိကအရေးပါသည်ဟု အလေးအနက် ပြောလိုပါသည်။ သင်သည် အရေးပါအရာရောက်ပါသည်။ သင် စတင်၍ ကြားဝင်မှုမပြုမီ သင်ကိုယ်တိုင်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို တင်းကျပ်ပါစေရန် အဆင့်များ ဆောင်ရွက်ပါ။ (၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းအတွက်နှင့် ပတ်သက်သော နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် ရင်းမြစ်များ ကဏ္ဍ ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ)။
အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပစ်မှတ်ထားခံရသောသူများကို ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုသည် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေသော်လည်း အမြန် စကားပြောဆိုခြင်း၊ DMS နှင့် အီးမေးလ်ပို့ခြင်းတို့မှာ လွယ်ကူပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ရလိုကြောင်း မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် ထိုတို့ကို စွမ်းရည် ပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်ပါ။
အကြမ်းဖက်သူများကို မည်သည့်အခါမျှ တန်ပြန်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း မတရားဖိနှိပ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ချင်စရာ ကောင်းသော်လည်း အမြဲတမ်း အကြံကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ဘေးလူမှကြားဝင်ခြင်းသည် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရသူကို ဦးစားပေးပြီး အကြမ်းဖက်ညှဉ်းပန်းမှု သံသရာကို ချိုးဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ချဉ်းကပ်နည်း ငါးခုစလုံးကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါစို့-
1. "အာရုံလွှဲပါ-" အခြေအနေ၏ ဆိုးရွားပြင်းထန်မှုကို လျှော့ချရန် အာရုံလွှဲစရာတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း
သတင်းကောင်းမှာ အင်တာနက်သည် အာရုံလွှဲစရာများပြားလှသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤနေရာတွ လုပ်ဆောင်စရာ အများအပြား ရှိပါသည်။
စိတ်ကူးတစ်ခုမှာ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု စတင်ဖြစ်ပွားစေခဲ့သော မူလပို့စ်ကို ပိုမိုပျံ့နှံ့စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် မည်သည့်အခါမျှ အကြမ်းဖက်မှုကိုမူ ပျံ့နှံ့စေချင်မည် မဟုတ်ပါ။ (သူတို့ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု မပေးပါနှင့်)။ သို့သော် ကာယကံရှင်၏အသံကို ချဲ့ကားပျံ့နှံ့စေခြင်းအားဖြင့် “ငါတို့ကတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားသံကို ထုတ်ပြောခွင့်ပြုမှာပဲ။ အဲဒါကို ငါတို့ like လုပ်မယ်၊ ထောက်ခံမဲပေးမယ်၊ retweet လုပ်မယ်၊ မျှဝေပေးကြမယ်” ဟူ၍ ပြောဆိုရာရောက်ပါသည်။ အခြား နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုပုံစံ အားလုံးကဲ့သို့ပင် အွန်လိုင်းတွင် နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းသည် လူအများကို အသံတိတ် နှုတ်ဆိတ်စေရန် ကြံရွယ်ထားလေ့ ရှိပါသည်။ ကာယကံရှင်များ၏ အသံကို ထုတ်ဖော်ပေးခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသူကို သူ၏စကားသံမှာ အရေးကြီးကြောင်း သင်က သတိပေးရာရောက်ရုံသာမက သူတစ်ပါးအား နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုပြုနေသူများကိုလည်း သူတို့၏ပစ်မှတ်ကို အသံတိတ်သွားစေရန် ကြိုးပမ်းမှုများမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးဆက်ကို ဖြစ်စေကြောင်း ပြသနိုင်ပါမည်။
အခြားနည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာ အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် လူအများအာရုံ သွေဖည်သွားအောင်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်စရာကောင်းသော တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးများ၊ ခုန်ပေါက်နေသည့် ဆိတ်အုပ်များ သို့မဟုတ် ပန်းရောင် converse ဖိနပ်ဖြင့် တောတွင်း၌ ပြေးလွှားနေသော ဆင်များ၏ ဓာတ်ပုံများစွာကို ကြည့်ရှုနေရချိန်တွင် မုန်းတီးစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အမှန်တကယ် ခဲယဉ်းပါသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းအရာများမှာ ဆိုးရွားပြင်းထန်မှုကို လျော့ကျစေရုံသာမက ရယ်စရာလည်းကောင်းပါသည်။ ထိုပုံများကို အမြောက်အများ ရှာဖွေဖန်တီးရာတွင် အင်တာနက်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
2. “လွှဲအပ်ပေးပါ-” ကူညီပေးမည့် အခြားသူတစ်ဦးကို ရှာဖွေခြင်း
လူတစ်ဦး ကြားဝင်ခြင်းမှာ ကောင်းသော်လည်း ပိုများလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
listserv များ၊ သင်၏ BFF များသို့ စာပို့သည့် အချိတ်အဆက်များ၊ သင်၏ သီးသန့် Facebook လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကဲ့သို့သော အကူအညီရနိုင်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများထံ ဆက်သွယ်ရန်နှင့် အချက်ပေး အသံပြုလုပ်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရသူ၏ စကားသံကို ချဲ့ကားပျံ့နှံ့စေခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအကြောင်းကို ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပလက်ဖောင်းသို့ သတင်းပို့တိုင်ကြားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးရန် ထိုသူတို့ထံ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဤအလုပ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော ကျွန်ုပ်တို့အကြားတွင် listserv များအနှံ့ ပေးပို့သည့် ဤသို့သော မှတ်စုများကို တွေ့မြင်ရသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ပါ- “အွန်လိုင်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အယောင်ဆောင်နေပါတယ်။ သူ @account ကို ဖယ်ရှားလို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စ Twitter ကို ပေးပို့တိုင်ကြားဖို့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်ပေးနိုင်ကြမလား”
ဉာဏ်ရှိသူများအတွက် အမှာစကား - လွှဲအပ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများအပြား ပထမဆုံး စဉ်းစားတတ်ကြသည်မှာ ရဲထံ ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရသူ၏ ကိုယ်စား ရဲထံ မဆက်သွယ်မီတွင် ထိုသူကို သင် အရင်ဆုံး ဆက်သွယ်မေးမြန်းသင့်သည်။ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ် မဟုတ်လျှင်) အကြောင်းမှာ အသားအရောင်၊ လိင်ပြောင်းလဲထားသူ* အသိုင်းအဝိုင်းများ စသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အပါအဝင် အွန်လိုင်းတွင် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများ၏ ပစ်မှတ်ထားမှုကို အများဆုံးခံရသူ များစွာမှာ ရဲဝင်ပါလာလျှင်လည်း ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံသွားသည်ဟု မခံစားရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
3. “မှတ်တမ်းပြုစုပါ-” ဖြစ်ရပ်ကို မှတ်တမ်းပြုစုပြီး နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသူထံသို့ ပေးအပ်ခြင်း
အွန်လိုင်းတွင် သင်တွေ့ကြုံရသော နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုမှန်သမျှကို ဆိုးရွားပြင်းထန်လာလိမ့်မည်ဟု သင်မထင်လျှင်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနသို့ မတိုင်ကြားလိုလျှင်ပင် မျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံများနှင့် hyperlink များ ရယူထားခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးသော အလေ့အကျင့်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲမှာ ထိုသို့သောအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရယူခြင်းသည် အွန်လိုင်းတွင် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသူများအဖို့ သူတို့မုန်းတီးသောအရာနှင့် ထိတွေ့ရမှုကို ပိုမိုများပြားစေသောကြောင့် ထိုသူများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ဘေးလူတစ်ဦးဖြစ်သော သင်၏ကဏ္ဍ ပါဝင်လာပါသည်။
နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာကုမ္ပဏီများသို့ တိုင်ကြား၍ ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၏ သက်သေအထောက်အထားများမှာလည်း ပျောက်ပျက်သွားသောကြောင့် ၎င်းမှာ အထူးသဖြင့် အရေးပါပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ပေးရန် ပြောကြားသည့်အခါ စက်မျက်နှာပြင်ရုပ်ပုံများနှင့် hyperlink များကို folder တစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းပြီး ဤကဲ့သို့သော စာနှင့်အတူ ထို folder တစ်ခုလုံးကို ထို့သူတို့ထံသို့ အီးမေးလ်ပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုပါသည်။ “ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို မင်းဆီမှာ မလွဲမသွေ အထောက်အထား ကျန်နေစေချင်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းထားဖို့ စက်မျက်နှာပြင်ရုပ်ပုံများကို ပူးတွဲပို့ထားပါတယ်။” သက်သေအထောက်အထားများကို (အီးမေးလ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက် တစ်ခါတည်း ကူးမထည့်ဘဲ) အကာအကွယ်တစ်ခုအောက်တွင် သင့်အနေဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားချင် နိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံရသူက ထိုသက်သေများကို တွေ့မြင်သောအခါ (၎င်းတို့ကို ကြည့်လိုခြင်းရှိမရှိ) ထိန်းချုပ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရပါမည်။
သင် နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရပါက အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ HeartMob (iheartmob.org) သို့ သွားရောက်ပါ။ ထိုနေရာက သင့်ကိုယ်စား နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအား စက်မျက်နှာပြင်ရုပ်ပုံများ ရိုက်ပေးရန် သေချာစွာ စိစစ်ထားသည့် ဘေးလူများပါသော အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းကို သင် ပြန်လည်စစ်ဆေးလိုသည့်အခါ (ပြန်လည်စစ်ဆေးလိုလျှင်) စနစ်၏ အတွင်းပိုင်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းပေးပါမည်။ "ဘလော့ခ်လုပ်ခြင်း” သို့မဟုတ် “ပိတ်ထားခြင်း” ကဲ့သို့သော နည်းများမှာ သုံးချင်းစရာ ကောင်းသော်လည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်း၊ ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဖုံးလွှမ်းသွားစေနိုင်ပါသည်။ ဘေးလူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဖော်ပြမှုများကို စောင့်ကြည့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို မှတ်တမ်းတင်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းပြောကြားပါ။ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရသူကို မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ရန်နှင့် မိမိချစ်ခင်သောသူများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အင်တာနက်မသုံးဘဲ ခဏအနားယူရန် တိုက်တွန်းပါ။
4. “အချိန်ဆွဲပါ-” နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
လူကိုယ်တိုင် နှောင့်ယှက်စော်ကားခြင်းတွင် စာနာစိတ်ဖြင့်ကြည့်သော အကြည့်တစ်ချက်ကဲ့သို့ အသေးအဖွဲ့လေးတစ်ခုသည် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် စိတ်ဒဏ်ရာကို လျော့ပါးစေသည်ဟု Cornell တက္ကသိုလ်နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနမှ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပါသည်။ ထိုအရာသည် အွန်လိုင်းတွင်လည်း များစွာခြားနားမှုမရှိပါ။ စာနာစိတ်ဖြင့်အကြည့်ကို တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် စာပို့ခြင်းနှင့် အစားထိုးလိုက်လျှင် သိပ်မကွာခြားပေ။
အချိန်ဆွဲခြင်းမှာ ထို့အတွက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နှောင့်ယှက်စော်ကားခံခဲ့ရသူကို ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ၎င်း၏အပြစ်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူတစ်ဦးတည်းလည်း မဟုတ်ကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် စကားပြောလိုခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို သတင်းပို့တိုင်ကြားရာတွင် အကူအညီ လိုအပ်ခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးကို ခိုင်မာအားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အကူအညီ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး သိသာထင်ရှားသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ၎င်းမှာ လစ်ဟာနေသော အဆင့်တစ်ဆင့် ဖြစ်နေသည်ကို မကြာခဏ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရပါသည်။
နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို ကြုံတွေ့ရသော လူအများစုမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတိုင်းက ၎င်းတို့အပေါ်ကြင်နာမည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့် တစ်သဘောတည်းရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ကြပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အဖို့ သည်းညည်းခံရသော ပိုမိုခက်ခဲ့သည့် အချိန်မှာ လူသိရှင်ကြား အရှက်ခွဲခံရနိုင်ပြီး လူတိုင်းက စောင့်ကြည့်နေကာ မည်သူကမျှ ဘာမျှမပြောသည့်အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ တွေ့မြင်ရသည်မှာ လူတစ်ဦးက တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ပြောဆိုသော စိတ်ဒဏ်ရာသည် မူလဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စိတ်ဒဏ်ရာထက် ပိုမိုဆိုးရွားနေလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပါ။ သင်က ထိုသူတို့ကို သိပါ စာပို့ပါ။ ထိုသူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ကုစားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ရုပ်ပုံများနှင့် လက်ဆောင်များ ပေးပို့ပါ။
5. “တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်း-” နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ကျူးလွန်နေသူနှင့် စည်းတစ်ခု ပိုင်းခြားကန့်သတ်ခြင်းနှင့် နှောင့်ယှက်ခံရသူအပေါ် သင်၏အာရုံစိုက်မှု ပြောင်းခြင်း
ကြားဝင်ခြင်း နောက်ဆုံးပုံစံမှာ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်း” နှင့် အခြားပုံစံများကို ကွဲပြားစေသောအချက်မှာ သင်က နှောင့်ယှက်ခံရသူနှင့် လူသိရှင်ကြား ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ကျူးလွန်နေသူက လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်သည်။ ကြားဝင်ခြင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စဉ်းစားမိသည်မှာ ထိုပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော် နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုမှာ သင့်ဘက် လှည့်လာနိုင်သောကြောင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ် ထိပါးနိုင်ခြေ အများဆုံး ပုံစံလည်း ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို မရွေးချယ်မီ သင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ် ပိုမိုအတွင်းကျကျ အကဲဖြတ်သုံးသပ်မှု လုပ်ဆောင်ရပါမည် -
· သင်၏အထောက်အထားများက မည်သည်ဖြစ်သနည်း။ ၎င်းတို့ကြောင့် သင့်အပေါ် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေ ပိုမြင့်မားစေနိုင်သလား။ ဥပမာ သင်သည် လိင်မတူသူများကို ချိုးနှိမ်သည့် အပြုအမူကို မြင်တွေ့ရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါက တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု လျော့နည်းသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
· သင်၏ ဘက်လိုက်သော အမြင်များသည် အခြေအနေအပေါ် သင်၏ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ သို့မဟုတ် ကြားဝင်ပုံတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေသလား။ ဥပမာ လူမည်းနှင့် လက်တင်အမျိုးသားများသည် လူဖြူ အမျိုးသားများထက် အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်နိုင်ခြေ ပိုများသည်ဟု သင် ယူဆထားပါသလား။
· သင် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေသလား သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြင်းအရာများက ရှင်းလင်းစွာ မရှုမြင်နိုင်စေရန် ဟန့်တားနေသလား။ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို သင်မြင်တွေ့သောအခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွင်း စိတ်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည့် အချိန်ကာလများသို့ ပြန်အပို့ခံရသလို ခံစားရပါက ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်း သိထားရပါမည်။ တစ်ဆင့်ချင်း အသက်ရှုခြင်း (4 အထိ ရေတွက်ပြီး အသက်ရှုသွင်း၊4အထိ ရေတွက်ပြီး အသက်အောင့်၊4အထိ ရေတွက်ပြီး အသက်ရှုထုတ်၊4အထိ ရေတွက်ပြီး အသက်အောင့်၊ ပြန်လုပ်) ကဲ့သို့ အသက်ရှုမှန်စေသည့် လေ့ကျင့်ခန်း သို့မဟုတ် သင့်ခြေထောက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ချကာ ကျောကို ကုလားထိုင်တွင် မှီရင်း သင်မြင်တွေ့ရသော အရာသုံးခု၊ ထိတွေ့နိုင်သော အရာနှစ်ခုနှင့် အသံကြားရသော အရာတစ်ခုတို့ကို ပြောဆိုခြင်း ကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်စေသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ကြည့်ပါ။ သင်သည် သင့်ကိုယ်သင် ပစ္စုပ္ပန်ကာလသို့ ပြန်ဆွဲမခေါ်နိုင်ပါက တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု လျော့နည်းသည့် ကြားဝင်မှု ပုံစံတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
· အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပစ်မှတ်ထားခံရသူသည် သင်သိသောသူ ဖြစ်ပါသလား။ ဖြစ်လျှင် ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ အကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက် ထိုသူထံ စာပို့ခြင်း၊ ဖုန်းဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသူက မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မသိခြင်း ဖြစ်နေနိုင်သောကြောင့် သူနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ရန်၊ ကော်ဖီဝယ်တိုက်ပြီး စကားနားထောင်ပေးရန် သို့မဟုတ် ထိုသူ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေး ခိုင်မာအောင် ကူညီပေးရန် ကမ်းလှမ်းပါ။
· အကြမ်းဖက်သူသည် သင်သိသောသူ ဖြစ်ပါသလား။ သင်နှင့် ထိုသူအကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး ရှိပါသလား။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ထိုသူကို ဆွဲဖယ်ပြီး ၎င်း၏ အပြုအမူအကြောင်း မေးခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြားဝင်ရန် သင်သည် ကောင်းမွန်သော အနေအထားတွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။ "မင်း ဘာကြောင့် အဲဒီလိုလုပ်ချင်သွားတာလဲ” ကဲ့သို့သော မေးခွန်းများ၊ သို့မဟုတ် "ဒီလိုလုပ်နေတာ မင်းဖြစ်မယ်လို့ ငါမထင်ဘူးကွာ” ကဲ့သို့သော ထင်မြင်ချက်များသည် ထိုကိစ္စအကြောင်း စပြောရန် အသုံးဝင်သော စကားများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
· အကြမ်းဖက်သူမှာ ဆိုးရွားပြင်းထန်သည့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဖူးသည့် မှတ်တမ်း ရှိပါသလား။ ဤသည်ကို သိရှိရန်မှာ ခက်ခဲနိုင်သော်လည်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၎င်း၏ အွန်လိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာမှုမှတစ်ဆင့် အမြန်ရှာဖွေကြည့်ခြင်းမှာ အသုံးဝင်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက်သူသည် လူသိများသူဖြစ်နေလျှင် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
· သင့်အစီအစဉ်ကို သိရှိထားပြီး လိုအပ်ပါက သင့်ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်သည့် သူငယ်ချင်းများ ရှိပါသလား။ သင် လုပ်ဆောင်နေသည့် အရာကို သူငယ်ချင်းအချို့ကို အသိပေးရန် စဉ်းစားပါ။ သို့မှသာ နောက်ပိုင်းတွင် အကူအညီရရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ခေါ်လိုပါက အသင့်ရှိနေပါမည်။
သင်သည် တိုက်ရိုက်ကြားဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့် -- သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာ စော်ကားခံနေရသူကို ကူညီပေးရန်သာဖြစ်သည်ဟု စိတ်ထဲထားပါ။ -- နှောင့်ယှက်စော်ကားနေသူကို အင်တာနက်ပြင်ပတွင် အမည်ဖော်ထုတ်ရန်၊ အရှက်ခွဲရန်နှင့် ကြိမ်းမောင်းပြစ်တင်ရန် မဟုတ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ (ထိုသို့လုပ်ရန်မှာ လုပ်ချင်စရာတော့ ကောင်းပါလိမ့်မည်။)
ကြားဝင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ထောက်ခံအားပေးသော၊ အပြုသဘောဆောင်သော သို့မဟုတ် လက်တွေ့အသုံးဝင်သော မှတ်ချက်များ၊ မက်ဆေ့ချ်များ၊ hashtag များဖြင့် ပါဝင်ပြောဆိုရန် ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ဆိုလျှင် HeartMob တွင် ထောက်ခံအားပေးသော မက်ဆေ့ချ်များမှာ အများဆုံးတောင်းဆိုခံရသော ကူညီပံ့ပိုးမှု ပုံစံဖြစ်သည် -- အကြောင်းမှာ ထိုမက်ဆေ့ချ်များသည် ကာယကံရှင် ကြုံတွေ့ရသောဖြစ်ရပ်ကို အွန်လိုင်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအနေဖြင့် အမှန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရာရောက်ပြီး သူ့အနေဖြင့် ထိုသို့ကြုံတွေ့ခံစားရရန် ထိုက်တန်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် သူ့ကို ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးနေသူ များစွာရှိကြောင်း အသိပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
HeartMob သည် သီးသန့် ပုဂ္ဂလိက ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တွင် ထောက်ခံအားပေးသော မှတ်ချက်များပေးရန် ခွင့်ပြုထားပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်ခြင်းမှာ “တိုက်ရိုက်” ကြားဝင်မှုပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက် အမှန် စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် အယောင်ဆောင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်လည်း သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သင့်သူငယ်ချင်းယောင်ဆောင်နေသူ ရှိပါက သင်၏အားပေးပံ့ပိုးမှုကို ပြသရန် အောက်ပါစာသားကဲ့သို့ တစ်ခုခုကို အများမြင်တွေ့အောင် မျှဝေနိုင်ပါသည်- “မိတ်ဆွေတို့က ကျွန်တော့်လို Victoria V ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဆိုရင် သူ့ရဲ့ အသုံးပြုသူအမည် အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ @vvictoria ကိုပဲ သေချာပေါက် follow လုပ်ထားပါ။ ရိုင်းစိုင်းစော်ကားတဲ့ လှောင်ပြောင်သရော်သူများက သူ့နေရာဝင်ပြီး အယောင်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီ @victoriav နှင့် @vvv impersonation အကောင့်များကို တိုင်ကြားဖို့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးကြပါ။” ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် အခြားသူများကို Victoria အား follow လုပ်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးလျက် သူ၏အသံကို ပိုမိုပျံ့နှံ့အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သလို လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာကုမ္ပဏီများက ဤပြဿနာကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ၊ လေးနက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းလျက် ထိုအကောင့်တုများကို တိုင်ကြားပေးသူ ပိုမိုများပြားစေရန်လည်း သင် တိုက်တွန်းပေးရာရောက်ပါသည်။
နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု ကျူးလွန်နေသူကို ၎င်း၏လုပ်ရပ်မှာ အဘယ်ကြောင့် နားလည်ပေး၍ရကြောင်း ပညာပေးချင်စရာဖြစ်ပြီး -- အခြားသူများကို လိုက်၍နှောင့်ယှက်စော်ကားနေသော သူများမှာ လေ့လာသင်ယူမှု အကောင်းဆုံး စိတ်နေသဘောထားရှိသူ အလွန်နည်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် စိတ်နေသဘောထား မရှိသည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့သော်လည်း နားလည်ပေး၍၊ လက်သင့်ခံ၍ ရသောအရာနှင့် မရသောအရာကို အများသိမြင်အောင် ဖော်ပြခြင်းသည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စံနှုန်းများ ချမှတ်ပေးနိုင်ပြီး အလားတူ အပြုအမူများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိသော အခြားသူများကိုလည်း အွန်လိုင်းတွင် ပိုမိုသတိပြုမိရန်၊ ပြောစကားကို နားထောင်ပေးနိုင်ရန်၊ ဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးရာလည်း ရောက်ပါသည်။ ဥပမာ “ဒါဟာ လူမည်းသတင်းထောက် တစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာ သူ့အပေါ် ခြိမ်းခြောက်ဖို့နဲ့ အပြစ်ရှာဖို့အတွက် ရိုင်းစိုင်းစော်ကားရာကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဗြောင်ကျကျသုံးဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ အမုန်းတရားကို ငြင်းပယ်ကြပါ” ဟူသော စာသားမျိုးနှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ခုကို အများသိမြင်အောင် ပြောကြားခြင်းမှာ အွန်လိုင်းတွင် စံနှုန်းများ ချမှတ်ရာ၌ ထိရောက်မှုရှိပြီး သတင်းစာဆရာများနှင့် လူမည်းများကို အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများတွင် မမျှတစွာ ပစ်မှတ်ထားခံနေရကြောင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သိမြင်နိုးကြားစေမှု တည်ဆောက်ရာတွင် ထိရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။
2017 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Pew ၏ လေ့လာမှုတစ်ရပ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၏ 66% မှာ အွန်လိုင်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသော်လည်း 30% သာလျှင် ကြားဝင်ခဲ့ဖူးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အွန်လိုင်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုကို သင် နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့မြင်သောအခါ သင်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကာ ကြားမဝင်ဖြစ်စေရန် မည်သည့်အရာက ဟန့်တားနေကြောင်း သတိထားကြည့်ပါ။ ထို့နောက်တွင် သင်လုပ်နိုင်သော အရာတစ်ခုခု ရှိမရှိ ကြည့်ပါ။ D ငါးလုံးထဲမှ လေးလုံးမှာ ဘေးလူအနေဖြင့် ကြားဝင်ရာတွင် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော နည်းလမ်းများဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ -- သင့်ရည်မှန်းချက်မှာလည်း နှောင့်ယှက်ပေးခံနေရသူကို အကူအညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စတင်၍ကြားဝင်နိုင်လာသည့်အခါ စတင်ပျံ့နှံများပြားစေသည့် အွန်လိုင်း နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများကို ဖြစ်စေသော ဓလေ့ထုံးစံကိုလည်း အပြောင်းအလဲ စလုပ်နိုင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။